News Collection: लिंग सानो भएर हो कि ?
लिंग सानो भएर हो कि ?
पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्दा मलाई केही गाह्रो पनि भएन र रगत पनि आएन। पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्दा गाह्रो हुन्छ भन्ने सुनेको हुँदा मलाई खुल्दुली भयो। मेरो श्रीमान्को लिंग सानो छ र हामी दुवै जना यौनसम्पर्कबाट सन्तुष्ट पनि छैनौं। के कारणले यस्तो भएको हो ? लिंग सानो भएर हो कि ? अनि मेरो श्रीमान्ले मैले पहिले अरूसँगै यौनसम्पर्क गरेको शंका पनि गर्नुहुन्छ।
के पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्दा रगत आउनैपर्छ ?
पहिलो यौन सम्पर्कको सन्दर्भमा किन के-कस्तो गाह्रो कुरा खोज्नुभएको स्पष्ट छैन। दुई अपरिचित व्यक्तिबीच यौनसम्पर्कजस्तो अन्तरङ्ग सम्बन्ध राख्नु, पक्कै केही असजिलो हुनसक्छ तर यदि व्यक्ति मानसिक तथा शारीरिक रूपमा तयार छ भने पहिलो यौनसम्पर्कमा कठिनाइ हुनैपर्छ भन्ने केही छैन। त्यसैगरी पहिलो यौनसम्पर्कमा रगत नै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसको चर्चा गरिहाल्नु भन्दा पहिले एकछिन यो निक्षेत्रको संरचनाका बारेका चर्चा गरौं।
योनि महिलाको नली आकारको प्रजनन अङ्ग हो र बाहिरबाट देखिने प्वाललाई योनिद्वार भनिन्छ। यही योनिद्वारको ठीक भित्रपट्टिमा गुजमुज्ज परेको पातलो छालाको पत्र वा झिल्ली हुन्छ, जसलाई योनिच्छद (Hymen) भनिन्छ। योनि तथा मूत्रद्वारलाई दुवैतिरबाट छोप्ने छालाका पत्रहरू हुन्छन् जसलाई सानो भगोष्ठ भनिन्छ। भगक्षेत्रमै मूत्रद्वार (पिसाब आउने प्वाल) भन्दा माथि अलि उठेको मासुको भाग हुन्छ, जसलाई भगांकुर भनिन्छ। महिलाको सबै बाहिरी प्रजनन् अंगहरू जस्तै योनि, मूत्रद्वार, भगांकुर समेतलाई दुवै तिरबाट छोप्ने छालाको बाहिरी पत्र हुन्छ, त्यसलाई ठूलो (बाहिरी) भगोष्ठ भनिन्छ। सामान्य अवस्थामा यी भगोष्ठहरूले महिलाको यौन तथा प्रजनन अङ्गलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ र चोट लाग्न दिँदैन।
विशेषगरी नव दुलहीको कुमारित्व (कौमार्य) नतोडिएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सामाजिक मान्यता छ। हुन त केटामा पनि यो कुरा लागू हुनुपर्ने हो। वास्तवमा यौनसम्पर्क राख्नु नै कुमारित्व वा कुमारत्व तोडिनु हो। केटाहरूको सन्दर्भमा धेरै चासो नदिए पनि केटीको सन्दर्भमा धेरै चासो दिइन्छ। पहिले-पहिलेको जमानामा योनिमा भएको योनिच्छद यौनसम्पर्क गर्दा च्यातिन गई रगत आउनुलाई नै केटीको कौमार्य भङ्ग भए वा नभएको आधार बनाइन्थ्यो, तर यो कुरा वैज्ञानिकतामा आधारित छैन। कतिपय युवती योनिच्छद जन्मजात नै नहुन सक्छ वा यसको राम्रोसँग विकास नै नभएको हुनसक्छ भने यौनसम्पर्कबाहेकका अन्य क्रियाकलापले पनि यसलाई पहिले नै च्यातिदिएको हुन सक्छ। महिलाहरूमा यो निच्छद च्यातिनेजस्ता शारीरिक प्रमाण भएको भनिएको स्थितिमा त अहिले आएर पक्का शारिरीक सम्बन्ध राखेका वा नराखेको भन्न सकिने स्थिति छैन। पुरुषमा त यो अझ अप्ठयारो हुन्छ भन्ने कुरा त स्पष्ट नै छ।
के लिंग सानो भएर असन्तुष्टि भएको हो ?
सन्तान उत्पादन गर्ने र यौनसुख दिने अङ्ग भएकाले लिङ्गको विशेष सांकेतिक महत्व छ। यसको लम्बाइ वा मोटाइसँग व्यक्तिको आत्मसम्मान जोडिएको हुन्छ। लिङ्गको लम्बाइ तथा मोटाइ व्यक्तिअनुसार फरक-फरक हुन सक्छ। सानो भन्नुभए पनि साइज नलेख्नुभएकाले यसै भन्न सकिएन।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने महिलाको सबैभन्दा यौन संवेदनशील अङ्ग 'भगांकुर' बाहिरतिरै हुन्छ। यसको घर्षणका लागि पुरुष माथि र महिला तल हुने आसनमा योनि-लिङ्ग मैथुनले खासै सहयोग गर्दैन। फेरि योनिको योनिद्वार (बाहिर) तिरको भाग यौन संवेेदनशील हुन्छ। लिङ्ग केही सानै भए पनि त्यसले योनिको बाहिरतिरको भागमा घर्षण गर्न पुग्छ। अर्को कुरा, भगांकुरलाई हात वा औंलाले नै चलाएर यौन चरमसुख प्राप्त गर्न सहयोग गर्न सकिन्छ। योनि, स्तन तथा अन्य यौन संवेदनशील अङ्गको मर्दन, घर्षण, अनि चलाउनेजस्ता अनेक क्रियालापमा संलग्न हुन सकिन्छ। त्यसबाहेक अन्य नयाँ प्रयोगहरू गर्न सकिन्छ। पुरुषहरूजस्तै महिलाहरू पनि यौन उत्तेजक दृश्य, स्पर्श अनि यहाँसम्म कि परिकल्पनाले उत्तेजित हुन्छन्। यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पाक्क्रीडामा संलग्न भए यौन उत्तेजना प्राप्त गर्न र चरमसुखसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ। यसले यौनसम्पर्कमा संलग्न दुवै जनालाई यौन चरमसुख साथसाथै प्राप्त गर्न मद्दत पनि गर्छ। साथसाथै चरमसुख प्राप्त गर्नु सजिलो कुरा होइन र यही नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। साथसाथै पाइएन भने पीर गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, पालैपालो गरेर यौन चरमसुख प्राप्त गर्न एक-अर्कालाई सहयोग गरे पनि हुन्छ। साथसाथै पाउँदा वास्तविक अर्थमा सम्भोग बनाउन सकिन्छ। सम्भोग अर्थात् 'संभोग' जसको अर्थ दुवै जना यौनसाथी (श्रीमान्-श्रीमती) ले समान रूपमा यस सुखलाई भोग गर्न पाउने कुरा भयो।
मुख्य समस्या के होला ?
तपाईंको सन्देशमा भएको सीमित जानकारीका आधारमा यसै भन्न नसकिए पनि तपाईंको श्रीमान्मा पहिलो यौनसम्पर्कमा तपाईंको योनिबाट रगत नआउनु वा तपाईंलाई गाह्रो नहुनुले तपाईंले विवाह पूर्वयौनसम्पर्क राख्नुभएको आशंका नै मूल समस्या हुन सक्छ। सन्देशअनुसार तपाईंको पहिलो यौनसम्पर्क तपाईंको श्रीमान्सँगै भएको आधारमा जवाफ दिने प्रयास गरेको छु। माथि भनिएजस्तै रगत नआउनु वा गाह्रो नहुनुलाई कौमार्य भंग भए-नभएको आधार बनाइनु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ। यस्ता आशंकाको समाधानको उपाय सजिलो भन्ने हुँदैन, तर ' शंकाले लंका जलाउँछ' भने उखानलाई मनन गर्नुपर्छ।
अहिले यस्तै उपाय अवलम्बन गरिहालौं भनिहाल्नुभन्दा पहिले तपाईंको श्रीमान्ले यस्तो शंका गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईंलाई लागेको मात्र हो कि साँच्चिकै यस विषयमा कुराकानी भएको छ, तपाईंलाई नै थाहा होला। श्रीमान्लाई यस्तो शंका भएको स्पष्ट रूपमै भन्नुभएको छ भने रगत नआउनु वा गाह्रो नहुनुबाहेक अन्य केही आधार छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि खोतल्ने प्रयास गर्नुहोस्। उहाँको यौनसम्बन्धी दृष्टिकोण कति फराकिलो वा संकुचित छ भन्ने कुरा पनि तपाईले अध्ययन गर्नुभएकै होला। महिलाप्रति त्यसमा पनि यौनको दृष्टिकोण कस्तो छ विचार गर्नुहोस्। प्रथम रात्रिदेखि नै यस्ता कुरा उठेका थिए वा पछि बढी भएर आएको छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान पुर्‍याउनुहोस् ? जीवनका अन्य पक्षमा तपाईंभन्दा उहाँले आफूलाई कमजोर त मान्नुभएको छैन भन्नेतिर पनि विचार गर्नुहोस्। कतिपय स्थितिमा पुरुषले आफ्नो कमजोरीपनलाई ढाक्न अनि आफूलाई महिला भन्दा उच्च स्तरको सावित गर्न यौनका कुरा प्रयोग गर्छन्। यस्ता विविध पक्षलाई केलाई पुनः प्रश्न पठाउनुभए तपाईंको समस्याको गहिराइमा पुगेर विश्लेषण गरी सहयोग गर्न सकिन्थ्यो।